Sergio Busquets oo laga helay Korona… (Goormee ayuu kusoo laaban karaa qaranka Spain?) – Gool FM
Sergio Busquets oo laga helay Korona… (Goormee ayuu kusoo laaban karaa qaranka Spain?)
Ahmed Nur June 7, 2021
(Spain) 07 Juun 2021. Xiriirka kubadda cagta dalka Spain ee Spanish Football Federation (RFEF) ayaa shaaciyay in xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Sergio Busquets laga helay xanuunka Korona Fayras.
Kabtanka xulka qaranka Spain hoggaamin doono tartanka qarammmada qaaradda Yurub ee Euro 2020 ayaa laga helay Koofid19 kaddib baaritaankii shalay ay mareen xiddigaha xulka iyo shaqaalaha oo idil, balse ma jirin shaqsi kale oo xanuunkan laga helay.
Sergio ayaa haatan la karaantiilay isaga iyo dadkii ay aadka isugu dhowaadeen waxaana uu xalay kasoo hayaamay deegaanka Las Rozas ee magaalada Madrid oo uu xulka ku tababaranayay, sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana la rajeynayaa inuu ugu soo laabto safka xulka La Roja.
Spain ayaa kulanka ugu horreeya ee Euro 2020 la ciyaari doono xulka qaranka Ukraine 14-ka bishan June, waxaana shaki weyn la gelinayaa inuu burburiyaha Barcelona kusoo laaban doono safka xulka kahor kulankaas.
Ku guuleystaha abaal-marinta PFA Player of the Year oo lagu dhawaaqay & rikoor u yaallay Cristiano Ronaldo oo la jabiyay
Qabsoomidda tartanka Copa America oo shaki weyn la gelinayo & xiriirka kubadda cagta dalka Argentina oo sheegay go'aankooda ku aaddan ka qayb galka tartanka xulalka Koonfurta Ameerika